NJE VIRUS NA-EZURU OZI SITERE NA MOZILLA FIREFOX NA GOOGLE CHROME - NETWORK NA INTANETI - 2019
Ọhụrụ nje Vega stealer: data nke ndị ọrụ n'ihe ize ndụ
N'oge na-adịbeghị anya, netwọk arụ ọrụ ọhụrụ usoro ihe omume dị egwu Vega Stealer, nke na-ezu ohi niile nke ndị ọrụ nke Mozilla Firefox na Google Chrome nchọgharị.
Dị ka ndị ọkachamara kwadoro na cybersecurity, software ọjọọ na-enweta ohere niile data nke ndị ọrụ: akaụntụ netwọk mmekọrịta, adreesị IP na data ịkwụ ụgwọ. Nje virus a dị ize ndụ maka òtù azụmahịa, dịka ụlọ ahịa na ebe nrụọrụ weebụ nke òtù dị iche iche, tinyere bank.
Ọrịa na-agbasa site na e-mail ma nwee ike ịnweta data ọ bụla gbasara ndị ọrụ.
The Vega Stealer virus na-ekesa site na email. Onye ọrụ ahụ na-enweta ozi-e na faịlụ nwere njikọ na nchịkọta short.doc, kọmputa ya na-egosikwa nje. Usoro mmemme ahụ nwere ike ọbụna iwere screenshots nke windo mepere emepe na ihe nchọgharị ma nata ozi niile nke onye ọrụ n'ebe ahụ.
Ndị ọrụ nchebe netwọk na-agba ndị ọrụ niile nke Mozilla Firefox na Google Chrome ume ka ha ghara ịmụrụ anya ma ghara imeghe ozi ịntanetị site na ndị na-amaghị ama. E nwere ihe ize ndụ nke nje Vega Stealer na-emetụta ọ bụghị nanị site na saịtị azụmahịa, kamakwa site na ndị ọrụ oge niile, ebe ọ bụ na usoro a dị mfe ịfefe na netwọk sitere na onye ọrụ gaa na onye ọzọ.